Scroll Bar Widget ပြုလုပ်နည်း ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
11:38:00 am Scroll Bar Widget ပြုလုပ်နည်း No comments
ကျွန်တော် ဘလော့လ်မှာ Scroll Bar Widget လုပ်နည်းလေးကို တင်ပြပေးပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ Dtree ကို အသုံးမပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ရတာလဲ ပေါ့ပါးပါတယ်။ ဒါကြောင့် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ။
1. မိမိတို့ Blog မှ Layout ကို click လိုက်ပါ.
ကို click ပြီ အောက်မှာ တင်ပြထားတဲ့ code တွေနေရာမှာမိမိရဲ့ Link
တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါ။ Your Text နေရာမှာ မိမိရဲ့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်တွေကို
ရေးပါ။ Hight နဲ့ width ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။မှုရင်းဆိုဒ်က
ပုံစံကိုကူယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်ရင်တော့ အသုံးချကြည့်လိုက်ပေါ့။
<li><a href=" Your are Link ">Your Text</a></li>
<li><a href=" Your are Link">Your Text</a></li>
<li><a href="Your are Link">Your Text</a></li>
<li><a href=" Your are Link ">Your Text</a></li><span style="fontweight: